manawphyulay's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
FemaleMyanmar Share on Facebook
Blog Posts (127)Discussions (96)EventsGroups (7) manawphyulay's Likes Manawphyulay's Friends
View All manawphyulay's Groups
Started this discussion. Last reply by Min Lwin Jan 16, 2011. မာမိုရီစတစ်တွင် ကော်ပီကော ဖောင်းမတ်ကော မရလို့
Started this discussion. Last reply by zayar Apr 22, 2010. အိုင်တီသမားလား။ ကွန်ပျူတာသမားလား။
Started this discussion. Last reply by Nick Khaing Feb 22, 2010. View All
From it beginner
From Khin Latt
From Soe Min Tun@Steven
manawphyulay leftacomment for Aung Kyaw HtinSaturdaymanawphyulay leftacomment for Ko ChitSaturdaymanawphyulay and ugly devil are now friendsSaturdayKhinMyoThu leftacomment for manawphyulay"လာလည်သွားတီ"Mar 30KhinMyoThu commented on manawphyulay's blog post လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖားများအကြောင်း"posts တွေလာဖတ်သွားတယ်...အမရဲ့ နည်းပညာတွေ ဗဟုသုတလေးတွေလည်း ရှယ်ပါဦးအမရေ..မျှော်လင့်နေမယ်"Mar 30KhinMyoThu commented on manawphyulay's blog post လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖားများအကြောင်း"အမ မနော ညီမကို add လိုက်ပါဦး. :)"Mar 30KhinMyoThu commented on manawphyulay's blog post လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖားများအကြောင်း"ဖား......."Mar 30KhinMyoThu liked manawphyulay's blog post လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖားများအကြောင်းMar 30 More... RSS
www.manawphyulay.wordpress.com Manawphyulay's Blog
Posted on January 16, 2013 at 2:50pm9Comments
ဖားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ သူဌေးက ပေးထား၊ ကျွေးထားသူ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မျက်စိဒေါင့်ထောက်ကြည့်ပြီး သူဌေးကို အတို့အထောင်ပြန်လုပ် သူဌေးယုံကြည်အောင် ပြောဆိုနေသူများကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူဌေးက မမေးရသေးဘဲနဲ့ တစ်လုံးမကျန် အိပ်သွန်ဖာမှောက် အူမချေးခါးမကျန် ပြန်လည်တင်ပြကြသည် များကို ဆိုလိုပါသည်။ ကောင်းသတင်းကို ပြန်မပြောပဲ မကောင်းသတင်းကို ပြန်လည်ဖြန့်သည်များကို ဖားလို့ သတ်မှတ်ထားခြင်း… Continue အင်တာနက်သုံးခြင်းဖြင့် ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေမည်နည်း
Posted on May 10, 2012 at 12:53pm 1 Comment
ကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသွားပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သင်အလုပ်အကိုင်ရှာနေပါသလား၊ လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခု တည်ထောင်ချင်ပါသလား၊ ဆက်သွယ်ရေး နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ချင်ပါသလား၊ အလုပ်ရုံတွင် လူတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လိုပါသလား။ ထိုအရာအားလုံးကို ကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထဲ၌ပင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပေးမည့်သူ (သို့) သင်ပြောသမျှကို လက်ခံနားထောင်ပေးမည့်သူများအား ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်း၌ ပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အတွေ့အကြုံအစစ်အမှန်ကို… Continue ဥာဏ်စမ်းလေးတွေ ဖြေကြည့်ရအောင်
Posted on February 18, 2012 at 1:02pm 1 Comment
နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာနေပြီဆိုတော့ သိချင်တာလေးတွေလည်း များပြားလို့လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိချင်တာလေးတွေ မေးမြန်းစပ်စုလိုက်ပါတယ်။ ဖြေပေးပါဦးနော်။ဒီနေ့ခေတ်မှာ အကြီးမားဆုံး နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေအဖြစ် ယခုအချိန်အထိ ရပ်တည်နေကြတဲ့ Cisco/ Microsoft/ Apple/ IBM စတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက ဘယ်လိုထုတ်ကုန်တွေနဲ့ စပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာကို သိချင်မိတယ်။ ဒီနေ့အချိန်မှာ ရှေ့ဆုံးမှာ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားတာတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်။ အစဉ်တစိုက် စထုတ်ခဲ့တဲ့ ထုတ်ကုန်ကို အခြေခံထားတဲ့… Continue Happy Myanmar New Year
Posted on April 18, 2011 at 11:06am 1 Comment
“Demonstration of Cisco devices password hacking and Cisco IOS backup restore” ခေါငျးစဉျဖွငျ့ လကျတှစေ့မျးသပျပွုလုပျမညျ
Posted on January 21, 2011 at 7:34pm 1 Comment
ICT-Laboratory “Demonstration of Cisco devices password hacking and Cisco IOS backup restore” ခေါငျးစဉျဖွငျ့ လကျတှစေ့မျးသပျပွုလုပျမညျမွနျမာနိုငျငံကှနျပြူတာပညာရှငျအသငျး (MCPA) သညျ အသငျးသားမြား၏ ICT ပညာရပျဆိုငျရာ လကျတှေ့ လလေ့ာမှုမြားအား အထောကျအကူပွုနိုငျရနျအတှကျ လစဉျ LAB Schedule မြားရေးဆှဲ၍ လကျတှလေု့ပျဆောငျမှုမြားကို ဆောငျရှကျပေးလကျြရှိပါသညျ။ Net-Info မှ (Lecturer) Complete ICT Solution Provider ဦးအောငျထှနျးလငျးမှ ဇနျနဝါရီလ (၂၉) ရကျတှငျ နလေ့ညျ ၁းဝဝ နာရီမှ ၅းဝဝ… Continue AddaBlog Post
At 1:36pm on March 30, 2013, KhinMyoThu said… လာလည်သွားတီ At 6:50pm on August 17, 2011, လေလွင့် said… မနောဖြူလည်လည်လာပါတယ်ဗျာ At 11:39am on August 17, 2011, Ko Chit said… Thanks, Ma Manaw! How are you doing? I hope everything is fine over there. At 10:39am on April 29, 2011, MELODYMAUNG said… Yes, busying with new job hunting and developing NyaunKanAye (Dharma Society, Singapore) site as volunteer. Thanks your padauk, sis At 6:11pm on November 12, 2010, Aung Kyaw Htin said… ညီမ မနောရေ ဘာတွေလုပ်နေလဲ သတိရလို့ ၊ At 12:55am on August 8, 2010, neynainglinn said… sorry ဗျာ At 2:35pm on July 27, 2010, KO HTEIK said… thankalot ...၀င်လို့ရသွားp အစ်မ အရမ်းကျေးဇူးတင်တရ်ဗျာ.... ၀င်လို့မရတာ ခြောက်လလောက်တောင်ရှိသွားp အစ်မရာ...အစ်မက ကိုယ့်မောင်လေးကိုတောင် happy birthday တောင်
မလုပ်ဘူးနော် စိတ်ဆိုးတရ် At 8:51pm on March 30, 2010, myo oo said… At 11:22pm on March 10, 2010, Aung said… Hi , I m visiting yr home .friendship is precious for life .May u be success in life too ! At 3:28pm on March 6, 2010, Kyaw Win Htun said… Thanks manawphyu No comments yet!
ml updated their profile5 hours agomanawphyulay leftacomment for Aung Kyaw HtinSaturdaymanawphyulay leftacomment for Ko ChitSaturdaymanawphyulay and ugly devil are now friendsSaturdaydevillove replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျWednesdaypeepaw replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျDec 3Nga_Pyort replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျDec 3LIquid@crystal replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျNov 29pyiphyomgmgsoe updated their profileNov 26pyiphyomgmgsoe leftacomment for thinnNov 26pyiphyomgmgsoe replied to pyiphyomgmgsoe's discussion Free SIP for Testing ! ! !Nov 26pyiphyomgmgsoe replied to Aung Myo Htet's discussion About CiscoNov 26 More... RSS